நீங்கள் துணிகளில் அளவு பற்றி கேட்க விரும்பினால், நீங்கள் என்ன அளவு? or என்ன அளவு (காலணிகள்) எடுக்கிறீர்கள்? உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால், யாராவது உங்களிடம் அளவிட வேண்டும்.
2 Krön.7; 14 "ငါ့နာမဖြင့်သမုတ်သောသူငါ၏လူတို့, သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်ဆုတောင်းနှိမ့်ချ, ငါ့မျက်နှာကိုမရှာနှင့်သူတို့၏မတရားသောသူတို့နည်းလမ်းတွေထဲကနေလှည့်ရကြလိမ့်မည်လျှင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်မည်သူတို့အပြစ်ကိုဖြေမည်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကြလိမ့်မည် (ငြိမ်းစေလျက် ) သူတို့၏မြေ။ "
8: 00 နှင့် 11: 00
အဘယ်ကြောင့်? ဘယ်လိုလဲ? အဘယ်သူသည်? အဘယ်အရာကိုအားဖွငျ့?
8: 00 နှင့် 10: 30
9: 30 နှင့် 11: 00
အဆိုပါ application ကိုတက်ကြွစွာမဟုတ်ပါဘူးနှင့်  ရက်အကြာမှာဖျက်ပါမည်။
ထို့နောက် hidaya သင်တို့အဘို့အလငျးကိုစောင့်ဆိုင်းဖြစ်ပါသည်,Don;t ကိုထိုသို့စောင့်ဆိုင်းသော်လည်းသင်ယခု မှစ. ရှာဖွေသို့မဟုတ်ပါက start.
10: 00 နှင့် 12: 00
တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ဤ fix ဖို့ဘယ်လိုသိကြပါသလား?
ဒီဇင်ဘာလတွင် 11, 2017
8: 15 နှင့် 11: 00
8: 15 மற்றும் 11: 00
நீங்கள் எங்கள் தயாரிப்புகள் பற்றி மேலும் அறிய விரும்பினால், தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.